Badeecad Cusub: Maaskaro Hemp Dabiiciga ah • Dawooyinka Inc.eu
Wax soo saarka cusub: maaskaro hemp dabiiciga ah
Hadda Corona wali wuu inala joogayaa lamana oga ilaa goorta ay tallaabooyinku dhaqan geli doonaan, kama takhalusi doonno kuwa waji galka ah ee xilligan jira. Sababtoo ah aan daacad u noqonno: iyagu waa wax kasta oo raaxo leh. Waxa kale oo jira dad qaba xasaasiyad xun ama u nugul la kulanka walxaha qaarkood. Xal hada waxaay umuuqataa xal: maaskaro afku hemp dabiici ah.
Waxaa jira laba nooc: 2-lakab maaskaro la tuuri karo ama nooc 3-lakab ah oo la dhaqi karo. Tan dambe ayaa hadda laga heli karaa Madaxa. Ma jeceshahay inaad isku daydo wax ka duwan mise waxaad xasaasiyad ku leedahay walxaha qaarkood ee maaskarada jira? Markaas kani waa hubaal beddel weyn. Maaskarada wajiga badan ayaa laga sameeyaa caag, vinyl ama polyester. Dhammaan walxaha aan dabiiciga ahayn ee dadka dhibi kara. Intaa waxaa dheer, dhammaantood si siman uma wada neefsan karaan, haddii aad la kulanto dareen cufan muddo kadib.
Maaskarada dabiiciga ah ee ka dhanka ah Covid
Maaskarada ayaa gebi ahaanba laga sameeyay dhar neefsasho leh. Lakabyada kore waxay ka kooban yihiin fiilooyin hemp ah iyo cudbi dabiici ah. Fiilooyinka hemp waa dabiici ahaan anti-fungal iyo bakteeriyada. Lakabka gudaha waxaa laga sameeyaa warqad hemp ah. Maaskarada waxaa lagu tolay dun dun ah oo cudbi ah. Taasi waxay ka dhigeysaa maaskaro afka hypo-allergenic oo ka madax banaan kiimikada. Sidan ayaad u dammaanad qaadaysaa badbaadada iyo caafimaadka naftaada iyo ta dadka kaleba markaad ku safreyso gaadiidka dadweynaha, diyaarad raacayso ama aad dhex marayso jidadka mashquulka badan.
Maaskarada 3-lakab waa lagu dhaqi karaa heerkul hooseeya. Dalbo maaskaro afkaaga dabiiciga ah hadda madaxyada madaxa.
taajFayras Coronaxagashamaaskaro afka ahmaaskaro afka ah
Isticmaalka CBD waa laga saaray ciidamada badda ee Mareykanka
Ciidanka Badda ee Mareykanka waxay uga digayaan ciidamada badda inay isticmaalaan alaabada ay ku jiraan CBD ama cannabidiol. In kasta oo ...
Xadgudubka Daroogada: Boris Johnson Ma Taageero Rugaha Isticmaalka Daroogada ee La Xakameeyo
Boris Johnson wuxuu sheegay inuu si dareen ahaan ah uga soo horjeedo qolalka isticmaalka maandooriyaha ee dowladda Scottish -ka ay rabto…
Bariga, galbeedka, beerashada guriga ugu fiican
Waxaa qoray mr. Kaj Hollemans, KH La-talinta Sharciga (@ KHLA2014) Muddooyinkii dambe wax walboo waa socdeen ...